Zimbabwe Inocherechedza Zuva reMauto
Nyamavhuvhu 14, 2012
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, neChipiri vakashora nyaya yehutongi hwejekerere nekudyidzana kwenyika dzepasi rose kana kuti "globalization" vachiti vanotaura nezveizvi vanenge vachida kubira Zimbabwe hupfumi hwayo.
Vachitaura munhandare yeNational Sports Stadium pakucherechedzwa kwezuva remauto, reZimbabwe Defence Forces Day, VaMugabe vati vanotaura nezvehutongi hwejekerere pamwe ne globalization chinangwa chavo ndechekuda kuwana mabiro ehupfumi hweZimbabwe.
Vati mauto enyika ane basa guru rekuona kuti hupfumi hwenyika, kusanganisira mangoda ekwaChiadzwa, haasi kubiwa nevapambepfumi. Mashoko aVaMugabe ekushora hutongi hwejekerere ashorwa neMDC inotungamirwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai.
VaTsvangirai nevamwe vakuru-vakuru muMDC vanga varipowo pamhemberero idzi. Mutauriri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, vaudza Studio 7 papedza VaMugabe kutaura kuti mashoko emutungamiri wenyika haana kuti twasa sezvo nyika dzose pasi rose dzava kumhanya nezwi rehutongi hwejekerere pamwe nekudyidzana.
Semagariro avo pamakungano akadai, VaMugabe vakurudzira kuti zvirango zvavakatemerwa ivo nevamwe vakuru muZanu-PF zvibviswe vachiti zvirango izvi zvakaiswa neEuropean Union neAmerica kuitira kuti veruzhinji vapandukire hurumende yavo.
Zvichakadaro, VaMwonzora vati vafadzwa nemamwe mashoko aVaMugabe ekuti mauto anofanira kuchengetedza runyararo asi havana kufara nekuti VaMugabe havana chavataura nenyaya yekupindira kuri kuita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vamwe vakuru-vakuru mumauto vakaita saVaMartin Chedondo naVaDouglas Nyikayaramba vanoti havasi kuzosaruta mutungamiri wenyika asina nhoroondo yehondo.
Panyaya yemararamiro emauto, VaMugabe vatiwo chiri kunetsa ndechekuti homwe yehurumende yakabooka zvekuti hurumende haisi kukwanisa kubhadhara mauto mari yemihoro ine musoro.
Vatiwo hurumende iri kushanda zvakasimba kuti mauto avakirwe dzimba dzekugara kwawo ega musiri munzvimbo dzinogara veruzhinji uye patove nedzimwe dzimba dzakatopera kuvakwa mumusha weDzivarasekwa dzichagarwa nevari muchiuto.
Mashoko aya anouyawo apo veruzhinji vari kugunun’una kuti vanogaro shungurudzwa nemauto munzvimbo dzinogara veruzhinji.